စိုစွတ်သောအသုတ်စက်များပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်စိုစွတ်သောအသုတ်စက်များထုတ်လုပ်သူများ
အလိုအလျောက် Cotton တစ်သျှူး/ စက္ကူတစ်သျှူးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
DL-Z200 ကလေးစိုစွတ်သောအသား (1-30pcs)
DL- Semi-auto စိုစွတ်သောတစ်သျှူးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စက်တစ်ခုလုံးကိုထုပ်ပိုးစက်၏ microcomputer controller ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းကို stepless ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲပြောင်းလဲခြင်း၊ အသုတ်အရေအတွက်နှင့်အခြားအရာများအားပြောင်းလဲရန်သုံးနိုင်သည်။
အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများစက်၏အခြေခံသဘောတရား၊ ကုန်ကြမ်းများကိုတိုက်ကျွေးခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း-ရေတွက်ခြင်း-ဖြတ်တောက်ခြင်း-ပြီးစီးသောထုတ်ကုန်များ တင်းအားထိန်းကိရိယာနှစ်စုံတပ်ဆင်ပြီးထုတ်ကုန်ခေါက်အရွယ်အစားတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေပါ။ Multi-function ခေါက်ဟောင်းများဖြင့်ခေါက်နည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပါ ၀ င်ပြီးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမည်သည့်အရေအတွက်ကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၆။ စားပွဲတင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်သွယ်ထားသောသံမဏိကိုသုံးပါ။ တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ...
၁ ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ခြင်း လိပ်ပူ; အထည်; အပ်စိုက်ကုထုံး၊ အ ၀ တ်များသုတ်။ ချပေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်း ၂ မျိုး ၃။ အပြန်အလှန်ချိတ်အမျိုးအစား: ခေါက်ဆွဲမဟုတ်သောအရာများအလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ အလိုအလျောက်အရည်၊ အလိုအလျောက်ရေတွက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် stacking၊ အလိုအလျောက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလိုအလျောက်ထုတ်ခြင်း
1. ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: သုံးအဆင့် 380V, 50Hz
2. ပါဝါ: 15KW
3. စက်၏အရွယ်အစား: 5000X1300X200mm (L * W * H)
၄။ အစိုတစ်သျှူး (mm) ၏ခေါက်နိုင်သောအရွယ်အစား (၁၅၀-၂၀၀) x (၁၄၀-၂၀၀) မီလီမီတာ (LXW)
၅။ စိုစွတ်သောတစ်သျှူး (မီလီမီတာ) ခေါက်နိုင်သောအရွယ်အစား (၇၅-၁၀၀) x (၆၀-၈၀) မီလီမီတာ (LXW)
6. ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: 5-30pcs
7. ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်း: 300-500pcs/min
၉။ ထုပ်ပိုးထားသောရုပ်ရှင်၊ အကျယ် ≤၂၈၀ အချင်း≤400
10. Spunlace, အကျယ် = 140-200, အချင်း≤1000
11. တံဆိပ်: Width≤70 Diameter ≤300
12. ခေါက်နည်းလမ်းများ: Z/ W ခေါက်
DL-220 Alcohol Cotton Sheet ထုပ်ပိုးစက်
(ပုံမှန်အရွယ်အစားဖွင့်လှစ်ထားသော ၆၀ × ၃၀၊ ၃၀ × ၃၀ ခေါက်၊ ဖြန့်ထုတ်ထားသောတစ်လွှာတည်း ၃၀ × ၃၀ ထုတ်ကုန်များ၊ အခြားအရွယ်အစားများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ပြင်ဆင်ပါကအထုပ်အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ)
●အရောင် touch screen operation interface interface; servo drive system; PLC programmable controller သည်စက်တစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှု၊ တိကျသောရုပ်ရှင်ကျက်ခြင်း၊ ဝါဂွမ်းစာရွက်များကိုတည်ငြိမ်စွာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိကျသောအိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။
●တင်သွင်းသောအရည်စုပ်စက်၊ ထည့်ထားသောအရည်ပမာဏကို touch screen ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်သည်။
high အရည်ပမာဏမြင့်မားမှု၏အခြေခံအရတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပူဖောင်းများမရှိခြင်း
machine စက်တစ်ခုလုံး၏တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အထွက်နှုန်း ၂၈၀-၃၅၀/မိနစ်